Ubani abathengisa Forex - Kuhle Forex EA sika | Isazi Advisors | FX Robots
IkhayaForex SchoolUbani abathengisa Forex
Ubani abathengisa Forex? Zezimali & Abahlanganyeli
I Usayizi Futhi Ukukhula Of Forex
With ivolumu ukuhweba ukuthi idlula $ 4 isigidintathu ngelanga, Forex kuyinto emakethe ngobukhulu futhi uketshezi kakhulu emhlabeni. Eqinisweni, ivolumu adayiswa e Forex uphakeme kakhulu kangangokuthi akukho lwedatha, nakuba njalo ngemva kweminyaka emithathu BIS (Bank of International Settlements) ishicilela imiphumela ucwaningo olwenziwa nge abahlanganyeli enkulu emakethe futhi kudala ukulinganisa okusekelwe izimpendulo etholwe.
Ukuthengiswa kwemakethe yezwe lokushintshaniswa kwamanye amazwe, ngensimbi
Inzuzo yesilinganiso nsuku zonke ngo-Ephreli, ngezigidigidi zamadola ase-US
Exchange Foreign amathuluzi 1,527 1,239 1,934 3,324 3,981
Spot Ukuthengiselana 598 386 631 1,005 1,490
phambili esisobala 128 130 209 362 475
Exchange Foreign Swaps 734 656 954 1,714 1,765
lwemali Swaps 10 7 21 31 43
Izinketho kanye neminye imikhiqizo 87 60 119 212 207
Umthombo: Triennial Central Bank Survey, 2010
Ithebula elingenhla libonisa izinguquko ezenzeka masinya kakhulu ngonyaka zevolumu yomhlaba wonke kule minyaka eyishumi nanhlanu edlule, zikhula zisuka ku-0.8 trillion ku-1992 zaya ku-3.9 trillion yi-2010, ziphindaphindeka kathathu ngosayizi. Kumele kuqashelwe ukuthi i-Forex ikhule kakhulu njengoba uMongameli uNixon evala iwindi legolide futhi imali yashiywa lapho ihlangana nezinye izindlela zezimali futhi abahlaseli bangakwazi ukwenza inzuzo. Kepha "igolide rush" langempela ekuhwebeni ngohlobo lwemali lwenzekile eminyakeni edlule ye-10, ngenxa ye-inthanethi, i-Euro entsha, nezindlela ezintsha zokwenza i-elekthronikhi zinciphise izindleko zokuthengiselana nokwanda kwezezimali emakethe. Bobabili abathengisi abakhulu nabancane babona ukuthi i-Forex isheshe iba yinkundla yokuhweba ethokozisayo futhi engabizi kakhulu futhi baqhubekela phambili ngenzuzo yabo yokuqagela kuyo.
Vele ukubeka $ 4 isigidintathu nsuku kuthengiselana ivolumu ngendlela elinganiselayo, kuba 100 izikhathi kunangendlela zonke isitokwe-Ukuhwebelana ndawonye. Futhi uma ukufanise $ 25 billion ivolumu usuku New York Stock Exchange, uyazibuza phezu indida kuba ukuthi amasheya ithandwa ezinkulu kangako, kuyilapho Forex kuyinto umqondo alien ngoba abantu abaningi namanje.
Ziyini izinzuzo ukuba lokhu Amazing nsuku zonke kuthengiselana ivolumu?
Thina, abadayisi encane okudayisa, izinzuzo EZINTATHU ekutheni le yemakethe omkhulu futhi uketshezi kakhulu emhlabeni:
Ezisheshayo Ukubulawa: Ephakeme zezimali uhumusha yokugcwalisa ngokushesha ngesikhathi kuqalisa. min ukubambezeleka.
Ukwenza ngentengo kulindeleke: Ephakeme zezimali uhumusha kithi egcwala ngentengo kulindeleke. min slippage (Ngaphandle ngesikhathi esibalulekile kakhulu izimemezelo izindaba).
Alikho ibhizinisi elilodwa ungakwazi ukulawula noma ukuhambisa emakethe.
Uma Forex Is So Big, Kungani Aint Forex Njengoba Popular Njengoba I Ngokuthenga Amasheya?
Izici ezimbili. Akuyona into yakudala, futhi kamuva nje isitholakala kumthengisi omncane "wokuthengisa".
Okokuqala, esikhulu esikalini kokuqagela phezu khulula izinga lokushintshanisa elintantayo kwezimali kube yibhizinisi elisha lokuhweba, liqala kakhulu noma lincane ku-1971 ngemuva kokuqhekeka kohlelo lwezezimali lweBretton Woods olukhishwe (“fixed”) lwemali enkulu kwiDola laseMelika (okwakucatshangwa ukuthi liguqukela kwegolide ). Ngo-Agasti 1971, i-Nixon inqume ukuguquguquka kwaba negolide, okwaqeda isikhathi sempilo esenziwe, "igolide exhaswa" yonyaka we-26 (1945-1971), futhi yavumela futhi imali khulula ehambayo futhi ephepheni kuphela esekelwe (fiat). I-New York Stock Exchange (i-NYSE) ngokuphambene selokhu isukela kusukela ngo-May 17, i-1792, eyinikeza ukuqala kwekhanda le-179 +.
Ngaphezu kwalokho, yize kokuqagela ku khulula zezimali ezintantayo bezilokhu zivela nge-1971, kwakungeyona kuze kube nge-1996 lapho abathengi abazimele (abathengisayo) bengayithengisa. Abacebile kuphela, njengamabhange nezimali zemigede, ababekwazi ukuyithengisa. Kodwa-ke ngenhlanhla kithina kube nezinguquko ngemuva ezasivumela ukungena kule kilabhu yabafana abacebile kakhulu. Nge-1998, i-inthanethi yayikhule ngokuthandwa futhi lokhu kwaholela kubathengi abaningi ukuvula izitolo eziku-inthanethi futhi kuvumela abahwebi abancane ukuthi bakwazi ukungena ekuthengiseni nge-elekthronikhi ngababili bamanye amazwe.
Ngakho Forex kuyinto empeleni esasisesisha abahwebi amancane, futhi ngenkathi izikhathi eziningi ezinkulu futhi ekhula exponentially ngokushesha kunokuba ezimakethe zamasheya, kuzothatha isikhashana ngaphambi kokuthi sesaziwe kanye.
A emashumini ambalwa eminyaka edlule, abahlanganyeli labalulekile eluLwimi Forex emakethe kwakungamadodana ngamabhange ukuthi wathatha malungana nezinye amabhange for ezihlukahlukene izizathu (kokuqagela izikhathi, hedging, njll), kanye nezinkampani (abathuthi futhi abangenisa izimpahla kanye nezinsizakalo) uzosebenzisa amabhange for exchange angaphandle yabo ukuthengiselana. Konke lokhu umsebenzi zaba mayelana 70% we umthamo jikelele ekhiqizwa kuleli Forex.
Kulezi zinsuku, Nokho, emakethe ishintshile. Nge ezintsha zobuchwepheshe futhi ikhono ukuqhuba ukuthengiselana kwezilwandle kalula kakhudlwana, nezinye izikhungo bayakwazi ukubamba iqhaza, kanye zimali ngabanye kanye abahwebi.
Kulezi zinsuku kokuqagela ebangela ezingaphezu kuka 95% womsebenzi jikelele nsuku zonke, okusho ukuthi iningi abahlanganyeli ukuthenga lwemali abazimisele ethola ukuthi lwemali ethile. Lezi ukuthenga olwenziwa kusukela ngamabhange ukuze abahwebi ngamunye.
Abahlanganyeli lomcoka Forex yilezi: amabhange, amabhange amakhulu, izinkampani commercial, Izimali ezivikela ukulahlekelwa, Futhi abahwebi ngamunye, Futhi sezizathu ezinkulu bona iqhaza Forex emakethe yilezi:
IMITHETHO ekushintshashintsheni kwemali ngazimbili, ukufunisela
Ukuvikelwa ziyaguquguquka kwemali ngazimbili, lisuselwa encazelweni ukuhweba izimpahla kanye namasevisi, hedging
IMITHETHO ukudluliselwa eyenziwe umehluko zenzalo
Kunamakhulu amabhange ezinkulu nezincane iqhaza kule Forex emakethe ngesisusa kunciphise siqu izingozi yabo exchange angaphandle nokuthi amaklayenti abo, kanye ukwandisa ingcebo abanikazi babo isitokwe. ebhange ngamunye, nakuba ihlelwe ngendlela ehlukile, has a edeskini nokuhwebelana obhekene myalo, ukwenza emakethe, futhi kwezinhlekelele. Indima edeskini nokuhwebelana nakho kungaba ukwenza inzuzo ukuhweba lwemali ngqo ngokusebenzisa hedging, Arbitrage, noma afanayo ezahlukene amasu.
Kukhona amabhange 25 ezinkulu akhawunti iningi ivolumu eqhutshwa, zazo phakathi kwabayishumi abaphasa ngamalengiso zibonakala ngezansi ethebuleni:
Market Yabelana 2012%
Amaphesenti ushintsho YoY
German Bank 1 14.56% -6.91%
I-Credit Suisse 8 4.68% -2.50%
Source: http://www.Euromoney.com forex inhlolovo
Phezulu emakethe uqimba interbank ebangela 53% sayo yonke imisebenzi. Ngemva kwabo kukhona emabhange amancane, kulandele corporations multi-kazwelonke (okuyinto kudingeka uthango ingozi futhi ukhokhe abasebenzi emazweni ahlukahlukene), uthango izimali ezinkulu, futhi okudayisa ezinye enkulu FX abenzi emakethe.
Amabhange ngokuvamile azibeka ezimakethe zemali eziqondiswa umbono othile womqondisi wemakethe, futhi yini ehlukanisa nabo abahlanganyeli abangabhange njengolwazi lwabo oluyingqayizivele "lwangaphakathi" lokuthengwa nokuthengisa izinkampani zabo nganoma isiphi isikhathi, okuyinto ubanika ulwazi olubanzi mayelana nokuthenga nokuthengisa izingcindezi zamazinga okushintshaniswa. Kodwa lokhu kunenzuzo yezinga eliphansi, ngoba akukho bhange elilodwa elikhulu kunamakethe, futhi amabhange asengozini enkulu ekuqhumeni okukhulu okungahambi kahle emakethe okulindelwe wona futhi ekuthengiseni izimakethe.
Imakethe interbank kuyindlela fancy yokusho ukuthi amabhange ukuhweba nomunye, lingekho endaweni emakethe emaphakathi. Imakethe interbank lingabonakala waqonda ngokuya inethiwekhi ehlanganisa amabhange nezinye izikhungo zezimali okuyinto, axhunywe ngokusetshenziswa kumadeski wabo esebenzelana, ukuxoxisana exchange rate. Le makethe interbank sekuneminyaka amashumi amaningi eminyaka. Nokho, e-90 sika uchungechunge izenzakalo zaziqala ukwenzeka (Ukususwa kwemibandela ekukhangiseni, internet, ukutholakala ngokuya kabanzi ukuhweba amanethiwekhi ngogesi futhi izinhlelo afanayo) ukuthi avunyelwe ukuvela wabenza kanye brokers ukubamba iqhaza emakethe interbank egameni lethu, okusinika ukusizakala amathuba amasha zokucabangela ku forex ukuhweba emhlabeni ezinikeza asizakale ephakeme, ubuncane ephansi, futhi 24 / 7 zokuhweba.
amabhange nezifo ezithile kuphela zingezinye abadlali ezinkulu kule Forex emakethe, nakuba isizathu esiyinhloko bona bazibandakanye akuyona inzuzo kodwa kunalokho ukuba lula izinqubomgomo yemali uhulumeni zabo (supply nokutholakala imali) futhi ukusiza ukulolonga ukuguquguquka ukubaluleka lwemali yabo (zenzalo).
A ibhange elikhulu nohlobo ungase angenele ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Ukuze uphinde ukusimama i izinga lokushintshisana
Ukuvikela amazinga athile intengo kusilinganiso sokushintsha kwemali evela eqinile mkhuba noma ukungalingani
Lapho imigomo kwezomnotho kudingeka lekumele azuzwe (kwamandla emali, ukukhula, njll)
Ezinye amabhange amakhulu kukhona olandelanayo ngaphezu kwabanye; abanye angenele njalo (efana Japanese Central Bank).
Amabhange ezibaluleke kakhulu maphakathi yilezi:
Federal Reserve (US emaphakathi asebhange)
I Bank of Japan
I Bank of Canada
I-European Central Bank
I Reserve Bank of Australia
Ukungenelela kwebhange eliphakathi kungathatha izinhlobo eziningana: i-1) ukuthenga ngokuqondile ukuphoqa amanani aphezulu noma ukuthengisa ukushaya amanani phansi; I-2) ishukumisela izinga lesithakazelo ukuze liqinise imali, phansi ukuze ilulame; kanye ne-3) engene emakethe futhi ekhombisa ukuthi ukungenelela kungenzeka, ngokubeka amazwana emithonjeni yezindaba mayelana nezinga laso elikhethiwe lemali, ngokuvamile lihunyushwa njengesibikezelo esenzweni esisemthethweni (esibizwa ngokuthi "i-jawboning").
Ezimweni ezimbi kakhulu, ngokwesibonelo, ngemuva eqinile mkhuba noma ukungalingani lwemali exchange rate, banake mpendulo central umnikazi nezenzo, njengoba kungenzeka i kokungenela yokutholwa ngomzamo ukuhlanekezela izinga lokushintshisana futhi zibe yize mkhuba esabekwa befisa. Ngokwesibonelo, Okhahlamba National Bank (SNB) kanye Bank of Japan benomthwalo wangenela umlando wakamuva ukudala uhamba elikhulu ezimakethe lwemali. .
Amabhizinisi Futhi Corporations
corporations letinkhulu naletincane (kusuka ezincane abangenisa / abathuthi multi-billion corporations multi-kazwelonke) iqhaza Forex ukuze ukudayisa izimpahla namasevisi phesheya, uthango ingozi, futhi ukhokhe abasebenzi emazweni ahlukahlukene. izinkampani abaningi bayathanda ikhokhwe elulwimini lwabo zezimali noma aseMelika ukuze uqedele ukuthengiselana kudingeka bathole izimali zakwamanye amazwe ngokusebenzisa ngamabhange. Esinye isizathu inkampani commercial kungase iqhaza Forex emakethe ukuba uthango ukuchayeka kwabo; Ngokwesibonelo, uma inkampani ukuthola izinkokhelo esikhathini esizayo ekhaya layo lwemali, futhi ngalolo hlobo lwemali iye depreciating, inkampani kusihambele emifushane (ethengisa) ekhaya layo lwemali uhambe isikhathi eside (ukuthenga) enye imali esilinganayo inkokhelo ukuze amukelwe, kanjalo sigweme ingozi intengo ukuguquguquka.
Izimali ezivikela ukulahlekelwa Futhi Investment Management Amankampani
Izimali ezivikela ukulahlekelwa ngokuyisisekelo abaphathi imali yamazwe omhlaba kanye ezifuywayo, kungaba lokudayisa amakhulu ezigidi, njengoba kwamachibi abo kwezimali utshalomali avame ukuba yinkulu kakhulu. Leli netha kwempahla ukubaluleka uthango ingaqalisa babalelwa ezinkulungwaneni eziyizigidi, kanye amafa okwedlulele ziphakeme namanje ngenxa asizakale futhi kwemali. Lezi abaphathi ukutshala egameni uhla amaklayenti kuhlanganise izimali zempesheni, izinkampani zomshuwalense, mutual funds, abatshalizimali abacebile, ohulumeni ngisho amabhange amakhulu. Uhulumeni uqalise amachibi utshalomali eyaziwa ngokuthieNgophezukonke ingcebo izimali (SWF) usukhulile ngokushesha eminyakeni yamuva, amanye washo ukuthi isihlokwana ukunakwa ngokuba ukuzalisa imali amabi Wall Street amafemu zezimali. Zonke lezi zimali uthango baye bafeza indima ebaluleke nakakhulu ezimakethe zezimali bebonke, futhi FX ikakhulukazi, kusukela 2000s, futhi kuba ukukhula kwabo nomsebenzi ukuhweba ukuthi yini ebangela ukuthi kungani phezu 80% kwamanye amazwe ukuthengiselana babé zokucabangela.
Foreign exchange inzuzo nezinto ezifana zezimali asizakale futhi izindleko iphansana ukudala utshalomali imvelo ehlukile lezi ababambiqhaza enkulu sikhwama. Ingxenye uthango Isikhwama Forex kufikile banethonya elikhulu lwemali Amathrendi kanye namagugu njengoba isikhathi siya phambili. Bangabaholi amabhizinisi ngempela ukuhambisa emakethe lwemali, ukuthenga noma ukuthengisa izindodla maphakathi nawo (amasonto) isikhathi eside (izinyanga kuya eminyakeni), futhi ngezinye izikhathi ukuthengiselana yabo omkhulu unbalance emakethe, ezidinga intengo izinguquko ukuze rebalance nezidingo. Ngokwesibonelo, i-Billionaire uGeorge Soros (Ngenhla) wenza fortune ukuhweba kwakhe FX, futhi Quantum Isikhwama bakhe bazuza idumela ukucabangela nolaka kusukela 1990. Isikhwama wasolwa ngokusebenzisa ingcindezi zezimali ngqo bazuze amasu alo zokucabangela: wangaphambili Malaysian uNdunankulu Mahathir Mohamad basola ukwehla we Malaysian Ringgit e 1997 ku uGeorge Soros. uGeorge Soros usevikele lokuthi wayeseholela nje sibambe ubuthakathaka eyaziwa ohlelweni zezimali zomhlaba. I counterargument wukuthi emazweni athile kanye nabaholi bayo angagcina Bubbles engasimeme ngokwezimali noma ngenye indlela mishandle iminotho yabo kazwelonke, futhi FX befisa ukwenza wokugoqa ngenakugwemeka kwenzeke ngokushesha esikhundleni salo nokuwuvumela ukulibala eside futhi babe ezinkudlwana.
Thina nabahwebi elincane abizwa ngokuthi abahwebi okudayisa, kunokusebenza abahwebi izikhungo, futhi nakuba ukuzibandakanya kwethu ku- FX emakethe liye landa ngendlela emangalisayo kule minyaka 10 iminyaka, sisalokhu kuphela zimumethe 2% wayo yonke FX ivolumu emakethe, nge-avareji nsuku zonke ukuhweba ivolumu phezu US $ 50-60 bhiliyoni.
Kunezinzuzo amabili ekubeni izinhlanzi ezincane echibini elikhulu: elikhulu ivolumu abahwebi engeza ukuba ibe yimali emakethe, futhi ubukhulu yethu encane usinika Ukuzivumelanisa nezimo xaxa yokunyakaza. kakade Sishilo le zezimali inzuzo isici: zibhujiswe ngokushesha futhi esobala. Isici Ukuzivumelanisa nezimo Kuyathakazelisa ukuphawula kanye. Ngenxa yethu Uhlaka isikhathi kanye nokutshalwa kwezimali umkhathizwe ngokuvamile sifushane, futhi asinalo yimuphi umthelela yakhoibrium funa / ukunikezela ekuhlanganisweni, ukuhweba kwethu amamodeli amavolumu aphansi asivumela ukuba Ukuzivumelanisa nezimo xaxa ukuze ufake futhi uphume emakethe. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi wabathengi namabhange ngokuvamile unike lisakazeka kakhulu baqaphe ukuze amaklayenti emikhulu obanika inzuzo izindleko asinalo.
Manje njengoba sesikhulumile ngo yahlanganisa inzuzo kungenzeka esinalo ekubeni (entry kanye ophumayo amathuba nezimo xaxa) amancane, kubalulekile ukugqamisa kusimo wethu: ngoba singamalungu izinhlanzi ezincane kule pool, ephansi ku eziwukudla ngokuya ngobukhulu nokuba yinkimbinkimbi, singabeNkosi kalula badliwe. 95% abadayisi okudayisa ulahlekelwe. Abahwebi amakhulu (amabhange, izinkampani kanye nezimali uthango) yiwona oshaka kulezi amanzi, bayadayisa imini nobusuku, bayazi ukuthi ukungena nasemigwaqweni izimakethe futhi udle ababuthakathaka. Laba balimi baqashe abantu eyinkimbinkimbi ukuhweba izinhlelo ukuthi ehogela ngaphandle abadayisi ababi unsophisticated ngubani kunamathuba amaningi okuthi ukubeka oda stop emazingeni ezisobala ukwesekwa kanye ukumelana. abahwebi okusha kunamathuba amaningi okuthi ulandele izikole ethandwa kakhulu yokucabanga nokuhlaziywa lebalulekile nobe lobuchwepheshe, ngakho esifushane noma ukuchema kuzo zabo ohlangothini avame ukubonakala futhi bexhashazwa oshaka. Ezinye wabathengi ukushicilela in-house zabo ratios ufisa ukuba izikhindi kunoma iyiphi lwemali Banikezwa isiphi isikhathi, ngokuthi inhliziyo, futhi ngoba siyazi ukuthi iningi Abadayisi okudayisa ulahlekelwe, izincomo ukudayisa counter umuzwa okudayisa okungemthetho bias ohlangothini.
Ukuze abadayisi yokudayisa ugweme ukuba yisisulu sakhe kubadayisi emikhulu, kufanele sigweme ukusilandela yimiphi yakamuva noma ethandwa izindaba imicimbi kanye nezikole yokucabanga. Uma yena uya ukulandela ubani, angase inzuzo okuningi kusuka uzama ukulandelela ukunyakaza abadlali ezinkulu, okuyinto engenziwa nge incazelo efanele imibiko ehlukene kwezomnotho, efana masonto onke uhlaka umbiko, elibonisa nokuchema ohlangothini abadayisi esikhulu ezahlukene kwemali ngazimbili.
Kungenjalo, omunye ungakwazi ukulandelela nokuhamba kwezindikimba enkulu yabahwebi ngokulandela izinyathelo intengo ku emikhulu isikhathi ifreyimu amashadi. Ephakeme isikhathi ozimele, efana ihora ezine namashadi nsuku zonke, ukuveza izinhloso zale abadlali ezinkulu. Kungenjalo, omunye Ungazama ukuba contrarian ukuthi isimo owawukhona abadlali ezincane. Ngokuvamile, kufanele ukuthuthukisa siqu ukuhweba uhlelo lwakho ne eyinkimbinkimbi multi-isikhathi izingxenye Uhlaka ukuthi une-onqenqemeni phezu abahwebi kokubili ezinkulu nezincane futhi lesi simiso kufanele adayiswa ayiyale noma automatized. Okuningi kule ezigabeni kamuva.
Izimali ezivikela ukulahlekelwa
Ukwenza ezisheshayo Ephakeme
Amankampani Investment Management
Usayizi nokukhula Forex
Ubani abathengisa Zezimali Foreign